Uhlelo "1c Salary futhi Abasebenzi" badalelwa sokubalwa kwezimali isinxephezelo abasebenzi, kanye nabasebenzi amarekhodi. Umkhiqizo ingasetshenziswa amabhizinisi ahlukahlukene ukuqaliswa izindleko kwemibiko, kanye yezinhlangano isabelomali oxhaswe isimo. "1c Salary futhi Abasebenzi" ikuvumela ukubala iholo ngokuzenzakalelayo, ahlele ezimali abasebenzi ukwenza ukubhaliswa kwezakhiwo, ukuthola isitifiketi kwabasebenzi izibalo, nokunye okuningi.
Amabhizinisi amaningi bakhetha ukuthenga uhlelo 1c Payroll ukuba lula umsebenzi abasebenzi, by automating izinqubo eziningi. Ukuba yizinhlobonhlobo uhlelo 1c Salary futhi Personnel Management ukuthenga, okungaba ku-intanethi kuhilela izindlela ezahlukene ekuxazululeni izinkinga, kanye ukuthola imibiko ahlukahlukene.
Okwamanje, kukhona ithuba lokuba ngishintshe ukwelekelela ohlelweni isampula ukucushwa elikhuthaza izidingo ngamunye inkampani ethile. Le nguqulo yokuqala umkhiqizo enezinto eziningi imisebenzi evumela ukuba uqhubekele ukubala pay izimali ngqo emva kokuthenga hlelo.
ukucushwa sokuqala ivumela ezihlukahlukene imisebenzi, ezinye zazo yilezi:
- ukubulawa oda senzelwe reception abasebenzi ukuze ibhizinisi;
- ukubulawa oda echuma abasebenzi;
- Faka amahlamvu abagulayo, kanye ukubala le mibhalo;
- yokubhaliswa ikhokhwe futhi ezingakhokhiwe ikhefu, kanye nokuthengisa amanothi;
- input bese ekubalweni yesikhathi esisodwa amabhonasi, kanye yesikhathi eside. Lesi sici kuhlanganisa kokubili anezele olulodwa noma unomphela ukuze amaholo abasebenzi kanye accrual of imali eyengeziwe ukuze iminyaka yesevisi ;
- ukubulawa oda for Ukukhishwa imiklomelo ngabanye namaqembu abasebenzi;
- ekubalweni izimali ezihlose nokugcinwa lempi kanye nabasebenzi bakahulumeni;
- ekubalweni amalevi intela, kuhlanganise esihlanganisiwe intela yomphakathi, izinkokhelo umshwalense ukuze Pension Fund, i-Social Insurance Fund, kanye kokuthola imibiko kanye namafomu intela kanye nezinye zikahulumeni;
- kuhlela ibhizinisi amasheduli;
- imibiko ekhethekile, okuvame ukuhlotshiswa ngayo isabelomali labasemkhatsini nalabakhulu;
- kokuqhuba abasebenzi mezhraschetnoy amaholo, kanye nokukhokhwa ngokwengxenye inkokhelo;
- ukubulawa oda ku yokuxoshwa, ukukhishwa ohlwini kwabasebenzi kanye ekubalweni isinxephezelo wokuphumula;
- ukungenisa kanye ukuthekelisa idatha edingekayo ngesakhiwo se-XML, nokuningi.
Isofthiwe umkhiqizo 1c Salary futhi Yezisebenzi intengo zazo incane, ngokushesha recoup izindleko yokufuna ngokwandisa ukuphumelela zokubala HR.
Lolu hlelo futhi ikuvumela ukuba usebenzise zonke izinketho design iyatholakala kwi-Windows ukudala ezihlukahlukene imibiko, kanye imibhalo ejwayelekile ngokuvumelana Imiphumela yabo. Abasebenzisi bangakwazi uqhuba yezinombolo ukhonjiswe umbiko, isibonelo, ukushintsha oda ukubonisa, isihlukanisi triad noma isihlukanisi ledesimali. imibiko ekhasini Multi-ingaqukatha iyiphi inombolo yemigqa kwesihloko noma kukhasi iyonke, ngokusiza ngokufanele aphule amarekhodi by ikhasi. Kungenzeka futhi ukusebenzisa ilogo, Ukukhetha umbala Amafonti ezahlukene ukuklama nemibiko ejwayelekile.
Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo ikuvumela ukubala idatha specific eNyakatho Ekude. Coefficient Regional, izintela zesifunda, isipiliyoni enyakatho futhi angabonelela ke - konke etholakalayo ngohlelo "1c Salary futhi Abasebenzi".
Thenga 1c Salary futhi Abasebenzi kungaba ku ezihlukahlukene amasayithi ukusabalalisa imikhiqizo software. 1c Portal Market unikeza uhla elikhulu izinhlelo amabhizinisi nezakhi ezihlukene, phakathi kwazo kukhona 1c Salary futhi Yezisebenzi. Thenga lolu hlelo, bese ukunikeza inkampani yakho kuyithuluzi for kwabasebenzi kanye accounting abasebenzi ngokuzenzakalelayo kakhulu yalezi zinhlelo semisho nezigaba asuse amaphutha kanye ukuqinisekisa ukuhambisana nesikhathi kanye nokunemba izinkokhelo.
20 izizathu kungani kufanele uqale ibhizinisi lakho siqu
Khumbula zabuna: laseChekhov, "ebuhleni nasebubini" - isifinyezo
I-Yorkshire Terrier: ukubuyekezwa kwabanikazi